Abo bazinyanga ezimbalwa ezedlule benza isibikezelo sokuhlangana kwakhona kwesibini ebhenkcezayo ishishini lokubonisa indawo, akuzange kuphutha. Namhlanje onke amajelo aseburhulumenteni axela iindaba zakamuva: uNikita Dzhigurda kunye noMarina Anisina kwakhona.
Ngomhla wokuqhawula umtshato wesibini, umdlali wezemidlalo kwi-instagram yakhe ngokungalindelekanga wabika ukuba uNicita Dzhigurdy wayexoshwe ngokunyanisekileyo. Emva kokukholelwa kwintambo, uAnnah wenza isigqibo sokuqhawula umtshato. Ngoku i-skater skater iqinisekile ukuba indoda yakhe ixhoba labanyundeli. Nangona kunjalo, ukuqhawula umtshato kwenzeka, nangona u-Aneless kumzuzu wokugqibela wayefuna ukuwukhansela.
UMarina Anisina wayenomdla kubafundi bakhe be-Instagram ngokukhulelwa okutsha
Emva kokuqhawula umtshato, umfazi kaNikita Dzhigurdy wanikezela iingxoxo ezincinci kumabonwakude. Abalandeli abatshitshisiweyo kwinkqubo ethi "Imfihlo Yesigidi" kunye no-Aneless, apho waxelela khona iinkcukacha ezininzi ngobomi kunye nombonisi.
Ewe, iiprogram ezinomdla kunye neZizhigurda ngokwayo zikhumbuza i-theatre yemisebenzi yempi, eyayibiza kuphela ividiyo ye-Dzhigurdy ne-Bratash, eyabonakala kumabonwakude ophakathi. Kwakubonakala ngathi emva kwezinto ezinjalo ezenzakalisayo zange zidibanise abo babesendoda ngaphambili.
Izolo, iminyaka engama-9 idlulile ukususela ngomtshato kaMarina Aneless noNikita Dzhigurdy. Abo babesele baqhawule ukugqiba le holide yentsapho baza bahlangana eFransi. Nge-Instagram Aneless ibonakala ifoto kunye nevidiyo kunye noNicita Dzhigurda. Umdlali wezemidlalo wamkela ukuba wayexolele umyeni wakhe wangaphambili waza wamcela ukuba angamgwebi:
Musa ukugweba. Ndixolela i-Dzhigurda! U-Nikita unguyise wabantwana bam, abangamnquli kuye. Ukuba wayesazi oko ndafunda, uya kwenza okufanayo! Kukho ukunyundela okuninzi kwaye silale ngathi! Kodwa siphume! Mhlawumbi iyakuthi, kodwa ngaphandle koluthando ihlabathi liza kugxina ebubini nakwiimfazwe! Ndiyazi ukuba ndiyamthanda kwaye ndiyamthanda. Uyakwazi ukuxolela, kwaye uya kuphumelela
Kulo mfanekiso, abalandeli uAneless babengakwazi ukubona i-skater yemifanekiso efihliweyo phantsi kweengubo zamahhala. Kwaye ibinzana likaMarina lokuba waxolela uLhiggurda emva kokufunda into ethile, yandisa nje ukusola ekukhulelweni kukaAneless. Kwiingxoxo abalandeli bebhola lezemidlalo baqala ukuvuyisana nabatshatileyo ngokudibanisa okuzayo.
U-Nikita Dzhigurda uthe ukukhulelwa okutsha kukaMarina Anisina
Unoyolo uNicita Dzhigurda ngokuzivuyisa waphendula imibuzo yabaphengululi abaye bafika kuye. Umbonisi uqinisekisile ukuba wahlangana kwakhona nomfazi wakhe wangaphambili waza ulungele ukutshata naye kwakhona.
U-Dzhigurda akazange aqinisekise, kodwa akazange aphikise ulwazi oluthi uMarine Anisina ulindele umntwana wesithathu. Umdlali onqabileyo wathi umfazi wakhe othandekayo ulungele ukuba ngumama kwakhona:
Ngokuphathelele abantwana, umntwana wesithathu ngokuqinisekileyo uya kuba nayo - uMarina wanikezela imvume. Ndifuna abantwana abaninzi kwintombazana yam intanda.
Ngelo xesha, uNikita Dzhigurda waphawula ukuba kwikamva elikufutshane uza kugxininiswa ngokupheleleyo neenkundla ngenxa yefa labo abafayo kuLyudmila Bratash.
Umendo weNkosana Diana ukutshabalalisa: ibali kwiifoto
UKiming-uFiliphu Kirkorov: ukumkani waseRashiya ujabule ngemitshato yomtshato
Nguwuphi na amabinzana alungileyo ukuqala ukuthetha, ukubonisa ngothando?
Indlela yokususa i-cellulite kwi-lyashek kunye neentambo ekhaya
Iingubo zangaphantsi zonyango
Izindlela zokukhawuleza ukulala
Masks ngobuso kunye nezandla zesitashi
Ukuphakamisa i-Smas: izibonakaliso, intsingiselo yenkqubo, umphumo
Iimpawu zesifo sebele
Unakekele iinwele ezincinci ekhaya
Yokutya kwe Buckwheat
Indlela yokuphilisa ubanda?
Ukusilalisa ubuso baseJapan
Ukupheka ukutya okutshisayo ngamnye ngosuku?
Ngaba ukubunjwa kunceda ukulahla i-cellulite?
Isaladi kwi-cauliflower, ikhukhamba kunye ne-macaroni